Ukuxhathisa okuNcinane kweeTrayire: Okufuneka Ukwazi
I-buzzword xa ifika kumathayi "yi-Low Rolling Resistance" (LRR). Ikhampani yonke yokutya ehlabathini iqhubekile kwi-bandwagon ephantsi yokuxhatshazwa kwaye ithengisa ubuncinci bodwa enye ibango ukuba iyona ephezulu yombane. Kodwa yintoni "ukuxhatshazwa okuphantsi" ngokwenene, kwaye umntu ukhetha njani phakathi kwesiphepho seLRR amathayi afika kwimarike? Unokwenza njani ukuthelekisa okunokwenziwa kombane phakathi kwezinto, zithi, iBridgestone ye-Ecopia kunye ne -Avid Ascend ye-Yokohama , umzekelo?
Yithini i-RRF kunye neRRC, kwaye kutheni benza intlungu yam ukuba icinge ngabo?
Nantsi i-downdown kwi-low-resisting rolling resistance.
Iimoto zeenqwelo zomoya zivelisa amandla, ubuninzi babo ekugqibeleni balahleka kwindawo ethile kumgca. Uninzi lwaloo mandla lulahlekile kwinjini ngokwayo nakwi-powertrain, kodwa amandla ekugqibeleni ayenze kumathayi kwaye asetyenziselwa ukuhambisa imoto. Ukuxhatshazwa ngokukhawuleza, ke, umlinganiselo wokuba ubuninzi bamandla obwenzela ukuba amathayi alahleke kokubili ukuqhubana kwendlela yomhlaba kunye nenkqubo eyaziwa ngokuba yi "hysteresis." I-hysteresis yinkqubo eyenziwa yile i-flexes isisindo sifike kuyo, kwaye emva koko ibuye ibuye ibe yimilo njengoko ijikeleza. Amandla abuyela kwidayara xa ehlengahlengayo, ngenxa yemithetho ye-physics, isoloko ingaphantsi kwamandla ayenzela ukutshabalalisa ithayi kwindawo yokuqala, ukwenzela ukuba ivili lilahlekelwe ngamandla kwiinkqubo zokuhamba kwimizuzwana yonke ihamba.
Okumalunga no-30% wamandla agqityiweyo okwenza ukuba amathayi aphelelwe ngumfutho okanye i-hysteresis.
Ekugqibeleni, onke amandla anikezwa yinqwelo yemoto evela kwi-tank yegesi, kwaye yile nto ukuzama ukugcina loo nto ibaluleke kakhulu-amandla angaphezulu ekuqhubeni imoto, ibe ngcono imoto ye-fuel mileage iya kuba.
Ngexabiso lentengo yegesi ehlawula lonke ixesha kunye nokuqwalaselwa kwendalo ngokubhekiselele kubaluleka obunyukisayo, ukusetyenziswa kwamanzi ngulo gama elitsha lomdlalo. Njengoko kunzima ukunciphisa ukuxhatshazwa kwinjinjini kunye nakwezinye izixhobo zokuncedisa amandla, oku kwenza ukuba amathaya abe enye yezona ndawo zize zifumaneke ukuzama ukubuyisela enye yamandla alahlekileyo.
Kwiminyaka eyadlulileyo, amathayi aphantsi kokungagxinwa kwakuthetha ukuba nevili elinomxube onzima werabha kunye nezindlela ezinqamlekileyo zokunciphisa ukuxhatshazwa kunye nokuxhamla. Ngoxa le ndlela yayisebenza ngokufanelekileyo ngokunciphisa ukungqubuzana, yenzelwe amathaya ahamba njengamawa kwaye ayenganyanga. Ngamhla, amatsha amashishini afaka i-silica-based based and oil oils ayashintsha umdlalo kwakhona. Iimveliso ezintsha zibonisa iimpawu ezintle zokuxhatshaza, ngeli xesha zihlala zihamba kakuhle kwaye zininzi
RRF kunye neRRC
I-RRF kunye neRRC ngamanani amaninzi aqhelekileyo asetyenziselwa ukuvavanya ukuxhatshazwa kwamanatha. I-Rolling Resistance Force ibaluleke ngamandla kumapounds okanye iikhilogram ezifunekayo ukujikeleza itayiti kwi-50mph ngokubhekisele kwidrama enkulu yentsimbi, ngelixa i-Rolling Resistance Coefficient ifunyanwa ngokwahlula i-RRF ngumthwalo owenziwe kuloo nto.
Inkqubo yokwenza oko kunokuba yinkxwaleko, kwaye kukho iingxaki ezimbalwa ezibandakanyeka ekusebenziseni la manani ukuthelekisa iimveliso ezahlukeneyo zamathaya. Nangona iRRF ilungele ukuthelekisa, ayiqwalasele ubungakanani kunye nomthwalo weevili, kwaye ngelixa iRRC ithatha le ngqalelo ingqalelo, oku kwenza kube nzima ukuthelekisa amathayi ahlukeneyo. Yingakho iinkampani zokukhathala zidla ngokuthengisa amathayi e-LRR ngokusebenzisa ukuthelekiswa okungaqhelekanga. Ngokuqhelekileyo uya kubona inkampani yokukhathala ithi ibhanti yabo "i-20% ngaphezulu yombane osebenzayo kunotshani lomqhubi" , okanye "ukuxhatshaza okungaphantsi kwama-10% kunokuba ithayile yangaphambili." Ndithe ndandulela kwaye ndiya kuphinda nditsho ukuba le manani ngokuqhelekileyo ukuba ngumyinge weRRC kuwo wonke umgca wamatayara okanye imeko efanelekileyo kakhulu yesayizi esithile, eyenza ukuthelekiswa okucacileyo nokuba nzima.
Enyanisweni, iprojekthi yam ehlobo ikwabekwa iifayile ezahlukeneyo zeLRR kwimoto yam ngeeveki ngexesha lokufumana ukuqhathaniswa okucacileyo kwesilinganiselo esisodwa somthamo esithwele umthwalo ofanayo, ukunika ingcamango ecacileyo yeyona nto ikhoyo phakathi kwehlabathi mavili.
I-teknoloji yeLRR yangoku iyakunika ukuphuculwa kwe-fuel-efficiency ye-1-4 mpg ngcono. Nangona oku kungabonakali ngathi kuninzi, kuthathelwa ngokubanzi kwimpilo yamathayi, iqala ukudibanisa. Kukho, nangona kukho imicimbi ebalulekileyo yokukhumbula.
Okokuqala, ukuba usichitha nayiphi na ixesha xa ufunda ingxoxo kwi-intanethi yeeTransitha, ngokuqinisekileyo uya kubona umntu ekhononda ukuba amathayi abo aseLRR amatsha anikezela ngaphezu kweevili zamatye. Kukho inkcazo elula yeetayitha ezigqityiweyo zinokumelana nokunyuka kwamanzi amaninzi. Xa ubeka amathayi amatsha endaweni yeendala, i-mileage yakho yamafutha iya kuhlala isweleka , kungakhathaliseki ukuba i-low resistance resistance rolling on the new tires. Uthelekiso olufanelekileyo kuphela phakathi kwamathayi amatsha kunye namanye amathayi amatsha, okanye phakathi kwamathayi afakwe kwizinga elifanayo.
Okwesibini, xa usebenzisa amanqaku amancinci angagxininisi, kukho izinto ezimbini ezinxulumene nokubaluleka kwimihlaba yokusebenza kwamanzi njengamavili.
I-Oil Oil : Ukusebenzisa isisindo esifanelekileyo seoli kwimoto yakho kuya kunqumla kwi-injection friction, kwaye oku kubangelwa ubuncinane ubuninzi kwi-fuel-efficiency gains njengamavili.
Uxinzelelo lweTire : Namavili amancinci angaphantsi kancinci aya kutshatyalaliswa ngokukhawuleza nayiphi na imali eyongenwa ngumntu onokuyifumana kumathayi e-LRR. Ndiyifumanisa ukuba ukuba ufuna ukufumana imali engcono kakhulu yokulondolozwa kwamatayara akho e-LRR, kukulungele ukuba uhlolisise ukunyanzeliswa rhoqo ngelixa ugcwalisa itanki.
Konke kuzo zonke, amathayi e-LRR avela njengeteknoloji entsha eluncedo kunye nesebenzayo, kuyo yonke into ebonakala ngathi yisebuntwaneni ngoku. Ngamaxabiso e-gesi ukuba yiyiphi enye into, kunokusoloko kuba yinto enhle ukuba ube namathayi angakugcina ugalelo oluthile ngelixa ugcina imoto yakho.
Indlela Yokungabonakalisi Iivili Zakho
Ukuhlaziywa: I-Nokian WR G2 Yonke i-Tires Tires
Uhlolo: I-General Altimax Arctic
Izenzo zokuSebenza kweTire zichazwe
Iingozi Ze-Wheel Widening
Ukuhlaziywa: I-Bridgestone Potenza RE970 NJENGOBA I-Pole Position
Ubunzima beTire obunjani obucacileyo
Uhlolo: I-Goodyear I-Eagle Sport Yonke Ixesha
Ngaba iifoto Bonisa iRekhodi yehlabathi ye-Grizzly Bear?
Indlela yokugcina iSketchbook
Imithandazo yokuxolela amaSulumane
Yenza iBarometer yeMimoya elula
Ukuthabatha i-Hammer Rock Rock
IsiSpanish IsiGama seLente, iVeki eNgcwele kunye nePasika
Ikhefu lethu elihlangeneyo: Uhlobo oluthile lweKlabhu yeNcwadi
I-Whitehorse, iNqununu yase Yukon